परिवर्तन म आफू हुनुपर्छ : दुर्गा खनाल - Safal Stories
Home Safal's Columns Freedom Column परिवर्तन म आफू हुनुपर्छ : दुर्गा खनाल
परिवर्तन म आफू हुनुपर्छ.
तिमीले त भनिदिए भयो
बुझ्नु त मैले आफूले पर्छ ।
न तिम्रो बाटो त्यो न मेरो ‘नामको’
तिमी हिंड्छौ भने
मैले पनि त पाइला चाल्न पाउनुपर्छ ।
तिमी खान्छौ अघाउँछौ भने
कमसेकम मैले बाँच्न त पाउनुपर्छ।
भिर मौरीमा न तिम्रो मेहेनेत न मेरो
त्यसो भए मैले पनि चाख्न त पाउनुपर्छ।
मेहेनेत बिनाको फल
मीठो पनि हुन्न
भए नि बिझाउँछ,
तर मानिसमा मानवता त हुनुपर्छ।
अरुको बर्बादि मै मज्जा छ होइन??
कुरोको तिर हान्नेले
संघर्ष पनि बुझेको हुनपर्छ।
कमसेकम आफ्नो सियो जति प्रगतीमा
रमाउन त जानेको हुनपर्छ।
जस्तो बोट उस्तै फक्रिन्छन् फूलहरु
सुन्दर चाहिन्छ होइन?
स्याहार गर्न जानेको हुनुपर्छ।
Previousचौध सयवटा प्रकाशकबाट अस्वीकृत भएपछि मिलेको सफलता
Nextविल स्मिथका प्रेरक भनाइहरु